Qeybtii Sadaxaad Soomaalida Ka Qayaxeysa Konfurta Sudan Oo Gaaray Mudisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shalay galab markii 3-aad Muqdisho gaarsiisay 213 ruux oo ka mid ahaa Soomaali kazoo baxday colaadda ka aloosan dalka Koonfruta Sudan.
Diyaarad ay kireysay wasaaradda arrimaha debadda Soomaaliya ayaa duulimaadkii 3-aad dad Soomaali kazoo qaaday magaalada Juba ee caasimadda Koonfruta Sudan, iyadoo dadkaasi u badan yihiin kuwo xoolahooda la boobay iyo kuwo ay qabsatay shaqo la’aan kadib markii inta badan shaqooyinkii dalkaasi u joogsadeen colaad aawgeed.
Qaar ka mid ah dadka lasoo celiyey ayaa uga mahad celiyey Safaaradda Soomaaliya ee Koonfurta Sudan iyo madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya sida ay muwaadiniinteeda ku go’doonsanaa dalka Koonfurta Sudan usoo daad gureysay.
3-da duulimaad ee dowladda Soomaaliya kazoo qaaday dalka South Sudan ayaa lagu soo daad gureeyey in ka badan 400 ruux, hase ahaatee Soomaalida ku nool dalkaaas ayaan intooda badan weli go’aansan iney halkaas ka tagaan.
Wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya ayaa mar ay South Sudan booqatay bishii Dec. ee sanadkii hore waxey sheegtay iney Soomaalida ku nool dalkaas lagu qiyaaso ilaa 10,000 ruux oo intooda badan ah ganacsato ladan.